ထူးတဲ့ ကိုး (9) | ကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
ထူးတဲ့ ကိုး (9)	# ထူးတဲ့ ကိုး (9)Published September 8, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in သင်္ချာဗေဒ | Tagged9ဂဏန်း သင်္ချာ,9ဂဏန်းဖွားများ, burmese horoscope, MaHaBote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, ထူးတဲ့ ကိုး (9), ထူးတဲ့ ၉, ၉ ဂဏန်း ဆိုရင်, ၉ ဂဏန်း အကြောင်း	Reports to my Friends !
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (60,798)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (49,437)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (47,204)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (32,048)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (24,074)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (15,391)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (13,211)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,715)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,759)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,410)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,357)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (10,220)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (10,164)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,134)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,456)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,416)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (9,092)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,908)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,764)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,756)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,293)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,897)# မေလအတွက် (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (7,790)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,745)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,614)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,570)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,354)# မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၃၇၅)ခုနှစ် (၇)ရက်သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,189)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (7,164)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (7,065)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !